कार्यक्रमचाहिँ एमाले विधान महाधिवेशन, खोइरो खनिन्छ प्रचण्ड-नेपालको « News24 : Premium News Channel
कार्यक्रमचाहिँ एमाले विधान महाधिवेशन, खोइरो खनिन्छ प्रचण्ड-नेपालको
काठमाडौं । अहिले गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा एमालेको भव्य रुपमा विधान महाधिवेशन चलिरहेको छ । आज विधान महाधिवेशनको तेस्रो दिन हो । तेस्रो दिन पार्टीका शीर्ष नेताहरुले समूहगत रुपमा बनाइएका टोली नेता अर्थात् प्रतिनिधिहरुले शनिबार राखेका धारणाहरुको जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिइरहेका छन् । तर, कार्यक्रमको सुरुमै उनी पार्टीलाई कसरी अग्रसर बनाउनेभन्दा पनि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुको खोइरो खने । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध सुरुमै उनी उत्रिए ।
तत्कालीन नेकपा पार्टीमा रहँदा वर्तमान छुट्टाछुट्टै दलका अध्यक्षद्वयको उपद्रो र तमासाबारे उनले खोइरो खने । भनिन्छ– कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर । शनिबार एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली प्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने थियो ।
तर, उनी सुरुमै तत्कालीन नेकपा पार्टी, एमाले विभाजनका किस्साहरु सुनाउँदै प्रचण्ड र नेपालविरुद्ध खनिए ।
उनले भने, ‘के बिग्रिएको थियो र तमासा गर्नुपरेको ? कहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्‍यो भन्या छ । कहिले अध्यक्षले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्या छ, किन राजीनामा गर्नुपर्‍यो थाहा छैन । हाम्रो पार्टीका बिग्रिएका मान्छे ती हुन्, जो छाडेर गए । सप्रिएकाहरू मात्र यहाँ छन् भन्न अरू कुनै प्रमाण चाहिन्छ र ?’
प्रचण्ड–नेपालविरुद्ध खनिएपछि उनी प्रतिनिधिहरुको प्रश्नमाथि पनि खरो टिप्पणी गरे । शनिबार समूहगत टोलीका प्रतिनिधिहरुले पार्टीमा व्यक्तिलाई प्राथमिकता राखेर संस्थालाई ओझेलमा पार्न खोजेको, कार्यकारी पद र दुई वर्षे उमेर हदमध्ये एक हुनुपर्नेलगायत थुप्रै धारणा राखेका थिए ।
तर, यी माथिका सवालमा भने ओलीले भने– हामी व्यक्तिपूजक होइनौँ, मूर्तिपूजक होइनौँ ? को व्यक्तिपूजक ?
यसअघि उपमहासचिव विष्णु पौडेलको जवाफ एमाले ओली हो भन्ने थियो ।